Raiso ny andraikitra hoy ny HMF ! – MyDago.com aime Madagascar
Raiso ny andraikitra hoy ny HMF !
HMF Antsahamanitra 26 Fev 11
Nanentana ny tsirairay handray andraikitra ny Hetsiky Ny Mpitondra Fivavahana na ny HMF. « Raiso ny andraikitra fa aza miandry ny hafa , ataovy izay hisian’ny fifamelana sy fihavanana marina mba hifaranan’ny Krizy » hoy ny hafany.
Tamin’ity fanompoam-pivavahana lehibe notanterahana tetsy Antsahamanitra ity koa no nahitana fa mbola akaiky ny fon’ny vahoaka ireto mpitondra fivavahana ireto, tonga mavitrika hatrany ny mpino Kristiana. Manoloana ny krizy lavareny eto amintsika dia manana ny heviny hamahana izany ny HMF. Tsy vahaolana ny fanaovana fifidianana maimaika, na ny fanaovana sori-dalana maro samihafa raha mbola mifankahala sy manao fo lentika ary mifandrafy ny olona, manoloana izany dia miantso ny ny mpiray Tanindrazana ny HMF hanandratra vavaka mba ho vahaolana avy amin’Andriamanitra tokoa no ho tanteraka eto Madagasikara. Tsy hangina izahay hoy ny izy ireo raha mbola misy ny olona voageja sy miaina amin’ny fampitahorana sy horohoro, mbola tsy misy ny fahafan’ny vahoaka malagasy. « Tsy hangina Aho noho ny amin’ny Ziona ary tsy hitsaha-miteny aho nnoho ny amin’i Jerosalema, mandra-piposaky ny fahamarinana tahaka ny fiposaky ny mazava » Isa.62:1
Vakio eto koa ny Communique HMF 26 Fev 11.
Photos FJKM Antsahamanitra 16 janv 2011 (1/4)
Photos FJKM Antsahamanitra 16 janv 2011 (2/4)
Auteur Solo RazafyPublié le 27 février 2011 27 février 2011 Catégories Malagasy, Politique, Religion
Précédent Article précédent : Photos Réunion de travail entre les Présidents Ravalomanana et Chissano
Suivant Article suivant : Video Fanambaran’ny Pasitera Andriamisata HMF